Tafsiirka Quranka Sh. Dirir - Android app on AppBrain
Android Apps > Tools > Tafsiirka Quranka Sh. Dirir
Application-kan ka dhagayso Tafsiirka Quranka oo dhan codka Sheekh Maxamed Dirir
by Somali Islamic Library
Aug 19, 2020 New App Version 1.0 in TOOLS for Free
Bismillahi Raxmaani Raxiim,
Waxaa marka hore mahad leh allah subxaanahu wa tacaalaa, oo inoo sahlay in aan manta inta afka soomaaliga ku hadasha udiyaarinay Application-kan casriga ah oo aad kaheli karto tafsiirka qur’anka oo afsoomali ah ee codka Sh.Maxamed Dirir ilaahay ajar iyo xasanaad ha kasiiyo.
Waxaan ku dadaalnay in application-kan inuu noqdo mid fudud isticmaalkiisa hadana si casriyaysan u samaysan oo uu qof waliba kaheli karo wax waliba uu u baahnaan karo si uu tafsiirka qur’aanka u dhagaysto.
Astaamaha uu leeyahay application-kan
1.	In aad suurada aad rabto ka dooran karto liistiga.
2.	In aad aayada aad rabto dooran karto.
-	taa waxay kuu fududeynaysaa xitaa adigo quraan iska akhrinaya ama dhagaysanaya hadaad is waydiiso ayaad kamidah quraanka, inaad aad dooran karto suurada iyo aayada oo markiiba aad tafsiirkeedii dhageesan karto.
3.	In aad qaari’a aad rabto dooran karto waxaa hada ku jira Saddex Qaari’ oo ay kala yihiin Sh.c/raxamaan alsudais, Sh.Mishary Alcafaasi iyo Sh.Sacad Alghamdi.
4.	In Marka aad suurada,aayada iyo Qaari’a aad doorato markiiba waxaa isfuraya kitaabka quraanka meesha ay kaga beegantahay doorashadaadii, si adigoo dhagaysanaya tafsiirkii aayadana kitaabka uga aragto.
5.	In aad calaamadaysan karto meel alla meesha aad ku joojiso, taasoo kuu fududeyneysa in aad dib uga bilaabato meesha aad ku joojisay.
6.	Hadii mobilke kugu soo dhaco adigoo tafsiirka kuu socdo markiiba codka tafsiirku wuu istagayaa marka aad call-ka iska jartid wuxuu markiiba kabilaabmayaa halkii uu ku istaagay adigoon waxba taaban.
7.	Adigoo codka tafsiirka dhagaysanaya mobilkaaga applicationo kale waad furan kartaa oo waad isticmaali kartaa.
aad aayada adigoo codka dhagaysanaya dooran iska iyo kaheli karo kartaa karto kitaabka kuu marka markiiba meesha quraanka rabto suurada tafsiirka uga waad waliba waxaa
allah aniga application asc ayad idinka masha siiyo waa الله
allah application ayad idinka maansha mahadsantihiin masha siiyo waa الله
anfaco appskan dhigo dirsaday faaidana iimasoo ilahay shaqaynayo waayo waxba